Iakhawunti YaseKhanada ye-Akhawunti ye-EI, i-OAS ne-CPP
Fumana i-EI yakho, i-CPP kunye ne-OAS Information Online
I-Akhawunti YaseKhadada ye-Canada (i-MSCA) isixhobo esifumaneka kwiNkonzo yeCanada, inhlangano karhulumente wenkonzo ehlawulwe ngokunikezela ngeenkonzo ezahlukeneyo zikaRhulumente. I-Akhawunti YaseKhanada ye-Canada inikezela ukufikelela kwi-intanethi ekhuselekileyo ukujonga nokuhlaziya iifayile zakho zeenkcukacha kwi:
Intshurensi yengqesho (EI)
Isicwangciso sePensheni yeCanada (CPP) , kwaye
Ukhuseleko Lokudala (i-OAS) .
Ungasebenzisa i-akhawunti yam ye-Akhawunti ye-Akhawunti yeKhanada ukuba:
Jonga iiRekhodi zeNgqesho ze-elektroniki (ROEs)
Jonga ulwazi malunga nesicelo sakho se-EI, kubandakanywa nomyinge we-weekly benefit, umhla wokuqalisa kunye wokuphela kwesibango sakho, ukuqala nokuphela kwesithuba sakho sokulinda, imali yakho evumelekileyo, inani leeveki uza kuba nelungelo lokufumana iinzuzo ze-EI, inombolo kweeveki ze-EI iinzuzo ozifumene kakade, iintsuku zokuhlawula, kunye neenkcukacha malunga nokuncitshiswa kwentlawulo
Jonga ulwazi kwiimfuno ze-EI zangaphambili
Hambisa ukungabi nakwiifomu zaseKhanada
Hambisa ifomu yoQeqesho okanye yoQeqesho
Phrinta isalathisi sakho sentlawulo ye-T4E yeenzuzo ze-EI ekusebenziseni xa ufaka irhafu yakho yerhafu
Qala okanye umise ukuthumela ii-T4E zakho zerhafu
Bhalisa ukuhlawula iintlawulo ze-EI kwingeniso yakho yokufumana umsebenzi
Tshintsha idilesi yakho okanye ulwazi lwefowuni
Bhalisela idiphozithi ngqo okanye utshintshe ulwazi lwakho lwebhanki
Ukufumana iimpendulo kwezinye i-EI, imibuzo ibone i-EI Ulwazi kwi-akhawunti yami ye-Akhawunti ye-Akhawunti yeKhanada Canada.
Isicwangciso sePensheni yeCanada (CPP)
Sebenzisa i-Akhawunti yam Akhawunti Yenkonzo:
Jonga ulwazi malunga neenzuzo zakho ze-CPP
Jonga kwaye uprinte ingxelo yakho ye-CPP yeNgalelo
Fumana uqikelelo lweenzuzo zakho zomhlalaphantsi we- CPP
Phrinta i- T4A (P) yakho yerhafu yokufumana isibonelelo sePPP xa usebenzisa ifayile yakho yentlawulo
Qala okanye umise ukuthumela ii-T4A (P) zakho zerhafu
Sitshintsha idilesi yakho okanye ulwazi lwefowuni (inqaku: kunokuthi kubekho ngaphandle)
Ukufumana iimpendulo kwezinye i-CPP okanye i-OAS, imibuzo ibone i-CPP kunye ne-OAS Ulwazi kwi-akhawunti yam akhawunti ye-Akhawunti ye-Canada.
Ukhuseleko Lokudala (OAS)
Jonga iinkcukacha ngeenzuzo zakho ze-OAS
Jonga imihla yokuhlawula iintlawulo zakho ze-OAS
Jonga inani leentlawulo zakho zeenyanga ze-OAS
Phrinta isalathisi sakho sentlawulo ye-T4A (OAS) ye-OAS ngeniso yakho yokubuyisela irhafu
Ukufumana i-Code Access
Ngaphambi kokuba ungabhalisa kwi-Akhawunti Yami ye-Canada, udinga ikhowudi yokufikelela-nokuba ikhowudi yokufikelela kwi-EI xa ufaka i-EI inzuzo, okanye i-Personal Access Code, ofuna ukuyifaka.
Ikhowudi ye-EI yokufikelela kwii-4 eprintiweyo ishicilelwe kwingingqi efihliweyo kwinkcazo yenzuzo eyithunyelwe kuwe emva kokuba ufake isicelo seNtshuwalense yengqesho .
Ukucela ikhowudi ye-Personal Access Code (PAC), funda ulwazi kwiSicelo seKhowudi ye-Personal Access Code. Emva koko nqakraza ku-Qhubeka kwiSaziso seSaziso seMfihlo phantsi kweli phepha. Funda kwaye uprinte isitatimende sencwadi yobumfihlo ukuze ugcine iirekhodi zakho.
Khetha uqhubeke kwaye unike ngolwazi olulandelayo uze ungenise:
Inombolo yomshorensi yentlalo
Igama lomsebenzi kamama
Ulwazi lwekhowudi kunye needesi
Kuya kuthatha iintsuku ezintlanu ukuya kwi-10 ukufumana iPAC yakho ngeposi. Xa unayo ikhowudi yokufikelela, unako ukubhalisa kwi-Akhawunti Yami ye-Akhawunti yeKhanada.
Indlela yokuBhalisa kwaye ungene kwi-Akhawunti yakho yeeNkonzo zeKhanada
Xa uya kwi-MSCA indawo uya kunikwa ukhetho phakathi kokungena kwi-CGKey usebenzisa i-ID yomsebenzisi waseKhanada yaseKhanada kunye nephasiwedi okanye usebenzisa iziqinisekiso onokube unayo nge-Sign-In Partner, njengalezo ozenzayo kwi-line ebhanki. Xa usebenzisa i-Sign-In Partner, i-Service Canada ayiyi kubelana ngolwazi oluququzelelwe ngumntu kunye ne-Sign In In Partner malunga neenkonzo zikaRhulumente ozifumanayo kwaye uMngeneli ongena ngemvume akayi kunika nayiphi na inkcazelo yomntu. kwinkqubo.
Inkonzo yeKhanada ayiyi kuqonda ukuba yiyiphi Inxalenye yokungena ngemvume oyisebenzisayo.
Ukuba ungumsebenzisi wexesha lokuqala, khetha "Ngaba ungumsebenzisi wexesha lokuqala? Bhalisa ngoku!" Emva koko nqakraza kwi-akhawunti ebomvu yokufumana i-akhawunti yam ye-akhawunti ye-Service Canada.
Ukubhaliswa kweGCKey kunye neNgena
Okokuqala, funda kwaye wamukele imimiselo neemeko. Yilungiselele ukuba:
Yakha i-Id yomsebenzisi
Yenza imibuzo yokubuyisela, iimpendulo kunye neengcebiso
Yakha uphinde uqinisekise iphasiwedi
Ukungena ngemvume kwiNkqubo yokuBhalisa
Funda kwaye uvumelane neMigqaliselo neMeko kunye neSaziso seMfihlo seConcerKey Concierge.
Khetha Uphawu lokungena kumlingani.
Ukusebenzisa uMngeneli wokungena ngemvume
Ukusebenzisa i-Agin-In Partner ukuze ufinyelele iAkhawunti yam eNkonzo yaseKhanada, kuqala, funda malunga nokusebenzisa i-FAQ-Partner FAQ. Bese ukhetha ukungena kwi-akhawunti yangaphakathi kwi-Akhawunti YaseKhanada yeKhansela ukuze ukhethe ukungena ngemvume kumlingani. Xa ukhetha uMngeneli wokungena ngemvume uya kuvuma imiqathango kunye neemeko kunye nesaziso somfihlelo se-SecureKey Concierge.
Amanqaku ekhompyutheni yokusebenzisa iMSCA
Gcina iInkcukacha Zakho eziKhuselekileyo. Xa uqedile iseshoni yakho ye-intanethi, qiniseka ukuba ungene ngemvume. Emva koko cima isilondolozi sakho sesiphequluli, kwaye uvale isiphequluli sakho.
Ikhukhi kufuneka zinikezelwe ukufikelela kwiAkhawunti yam ye-Akhawunti yeKhanada.
Ukuba usebenzisa amabhukumaka ukufikelela kumaphepha athile e-Akhawunti Yase-Akhawunti YaseKhanada, unokuthi ungene kwiingxaki zobuchwepheshe.
Kweminye imiba yekhompyutha, funda i-Computer Issues kunye nemiyalezo ye-FAQ
Ngubani ozakuqhagamshelana nemibuzo
Ukuba unobungozi usebenzisa i-Akhawunti ye-Akhawunti Yase-Akhawunti yeKhantektha, into enokuyenza kukuba u tyelele i-Ofisi ye-Service Canada kufuphi nalapho abasebenzi baseburhulumenteni abanolwazi baya kunceda ukunceda.
Indlela yokufaka ifayile yakho yeRhafu yeNgeniso yeNgeniso yeKhanada
Ngubani onokuvota kwii-Canadian Federal Elections
I-Canadian Gun Laws yama-American Travelers
Ukhuseleko lwaseKhanada ye-Old Age (OAS)
Iimpawu zenyanga: inyanga eLibra
I-Halestorm I-Biography neProfayili
I-Atlantic Cod (uGadus morhua)
Yintoni endiyiyo ukuba ndiyisebenzise i-USCIS?
Umbutho Welizwe Uchasene Nomfazi Wokuxhalaba
Umbhalo wokubhala kubantwana abaneDyslexia kunye neDysgraphia
Yintoni Enhle Imbobo Yokugodla I-Matt Mate?
Intaba yeqhwa leNtaba
Ikhontrakthi yomtshato yomthetho e-Islam
Ukurekhoda iBass Guitar
I-Multi-Sensory Instruction kwiMathematika yeMfundo eZodwa
Iinqununu ezintlanu okanye 'iPancha Shraddha' - amaHinduism Basics kubantwana
Isingeniso kwiLizwi laseJapan elithi Koishii
Idioms kunye neNkcazo ngeNdlela
I-Top 10 yeGolfers ye-All Time kwiBritish Open
Gene Cernan: Indoda Yokugqibela Ukuhamba NgeNyanga